Tantaran’ i Lehia sy i Sarià vadiny ary ny zanany efatra mirahalahy, antsoina hoe, (atomboka amin’ ny zokiny indrindra) Lamàna, Lemoela, Samy ary Nefia. Mampandre an’ i Lehia ny Tompo mba handao ny tanin’ i Jerosalema, satria maminany amin’ ny vahoaka izy ny momba ny helony ary ireo dia mitady hamono azy. Mandeha mandritra ny telo andro any an-tany foana izy sy ny fianakaviany. Mitondra ny rahalahiny i Nefia ary miverina any an-tanin’ i Jerosalema haka ny rakitsoratry ny Jiosy. Ny fitantarana ny fijaliany. Mampakatra ny zanakavavin’ i Ismaela ho vady izy ireo. Mitondra ny ankohonany ary mankany an-tany foana izy ireo. Ny fijaliany sy ny fahoriany any an-tany foana. Ny fizotry ny diany. Tonga eo amin’ ny rano midadasika izy ireo. Mikomy amin’ i Nefia ny rahalahiny. Reseny lahatra ireo, ary amboariny ny sambo iray. Miantso ny anaran’ ny toerana hoe Soafeno izy ireo. Mita ny rano midadasika hankany amin’ ny tany nampanantenaina izy ireo, s.n.s. Izany dia araka ny fitantaran’ i Nefia; na raha tsorina, izaho Nefia no nanoratra ity rakitsoratra ity.
Nanomboka ny rakitsoratry ny olony i Nefia—Nahita andry afo tamin’ ny fahitana i Lehia ary namaky tao amin’ ny bokin’ ny faminaniana—Izy dia nidera an’ Andriamanitra, nanambara mialoha ny fiavian’ ny Mesia ary naminany ny fandravana an’ i Jerosalema—Nenjehin’ ny Jiosy izy. Tokony ho 600 talohan’ i J.K.
Nitondra ny ankohonany nankany an-tany foana amoron’ ny Ranomasina Mena i Lehia—Nandao ny fananany izy ireo—Nanatitra sorona ho an’ ny Tompo i Lehia sy nampianatra ny zanany lahy mba hitandrina ny didy—Nimonomonona manohitra an-drainy i Lamàna sy i Lemoela—Nankatò sy nivavaka tamim-pahatokiana kosa i Nefia; niteny taminy ny Tompo, ary nofidiana ho mpanapaka ny rahalahiny izy. Tokony ho 600 talohan’ i J.K.
Niverina tany Jerosalema ny zanakalahin’ i Lehia mba haka ireo takela-barahina—Nandà ny hanome ny takelaka i Labàna—Namporisika sy nampahery ny rahalahiny i Nefia—Nangalatra ny fananany i Labàna ary nanandrana ny namono azy ireo—Nikapoka an’ i Nefia sy i Samy i Lamàna sy i Lemoela ary nolevileven’ ny anjely iray. Tokony ho 600–592 talohan’ i J.K.
Ny namonoan’ i Nefia an’ i Labàna, araka ny didin’ ny Tompo, ary ny nahazoany ny takela-barahina avy eo noho ny tetikadiny—Nisafidy ny hiara-dia amin’ ny ankohonan’ i Lehia any an-tany foana i Zôrama. Tokony ho 600–592 talohan’ i J.K.
Naniny an’ i Lehia i Sarià—Niara-paly izy ireo tamin’ ny fiverenan’ ny zanany lahy—Nanolotra fanatitra izy ireo—Ny firaketan’ ny takela-barahina ny asa soratr’ i Mosesy sy ny mpaminany—Nampahafantarin’ ny takelaka fa avy amin’ ny taranak’ i Jôsefa i Lehia—Naminany ny momba ny taranany sy ny fitehirizana ny takelaka i Lehia. Tokony ho 600–592 talohan’ i J.K.
Nanoratra momba ny zavatr’ Andriamanitra i Nefia—Ny fikasan’ i Nefia dia ny handresy lahatra ny olona hanatona an’ Andriamanitr’ i Abrahama ary hovonjena. Tokony ho 600–592 talohan’ i J.K.
Niverina tany Jerosalema ireo zanakalahin’ i Lehia ary nanasa an’ i Ismaela sy ny ankohonany mba hiara-dia aminy—Nikomy i Lamàna sy ny hafa—Namporisika ny rahalahiny i Nefia mba hanam-pinoana ny Tompo—Nafatotr’ izy ireo tamin’ ny tady izy ary notetehiny ny hamono azy—Ny herin’ ny finoana no nahafaka azy—Nangataka famelana ny rahalahiny—Nanolotra fanatitra sy fanatitra odorana i Lehia sy ny mpiaradia aminy. Tokony ho 600–592 talohan’ i J.K.
Nahita ny hazon’ aina tamin’ ny fahitana i Lehia—Nihinana tamin’ ny voany izy ary naniry ny hanaovan’ ny ankohonany torak’ izany koa—Nahita anja-by, lalana ety sy tery ary zavon’ ny haizina izay mandrakotra ny olona izy—Nihinana tamin’ ny voany i Sarià sy i Nefia ary i Samy, fa nandà kosa i Lamàna sy i Lemoela. Tokony ho 600–592 talohan’ i J.K.
Nanao rakitsoratra roa karazana i Nefia—Samy antsoina hoe ny takelak’ i Nefia ny tsirairay avy aminy—Nirakitra ny tantaram-piainana an-davanandro ny takelaka lehibe; namaofivaofy indrindra kosa ny momba ny zava-masina ny takelaka madinika. Tokony ho 600–592 talohan’ i J.K.
Naminany i Lehia fa ny Jiosy dia hoentin’ ny Babyloniana ho babo—Nolazainy ny amin’ ny hiavian’ ny Mesia iray, ny Mpamonjy, ny Mpanavotra eo anivon’ ny Jiosy—Nolazain’ i Lehia koa ny fiavin’ ilay hanao batisa ny Zanakondrin’ Andriamanitra—Nolazain’ i Lehia ny amin’ ny fahafatesana sy ny fitsanganan’ ny Mesia amin’ ny maty—Nampitahainy tamin’ ny hazo oliva iray ny fielezan’ i Isiraely sy ny fanangonana azy indray—Niteny ny momba ny Zanak’ Andriamanitra, ny fanomezana ny Fanahy Masina ary ny ilana ny fahamarinana i Nefia. Tokony ho 600–592 talohan’ i J.K.
Nahita ny Fanahin’ ny Tompo i Nefia ary naseho azy amin’ ny fahitana ny hazon’ aina—Nahita ny renin’ ny Zanak’ Andriamanitra izy ary nianatra ny momba ny fiambanian’ Andriamanitra—Nahita ny fanaovana batisa, ny fampianarana ary ny fanomboana ny Zanakondrin’ Andriamanitra izy—Nahita koa ny antso sy ny asa fanompoan’ ny Apostoly Roa ambin’ ny folon’ ny Zanakondry izy. Tokony ho 600–592 talohan’ i J.K.
Nahita ny tany nampanantenaina tamin’ ny fahitana i Nefia; ny fahamarinana, ny heloka sy ny faharavan’ ny mponina tao; ny fiavian’ ny Zanakondrin’ Andriamanitra teo anivony; ny fomba hitsaran’ ny Mpianatra Roa ambin’ ny folo sy ny Apostoly Roa ambin’ ny folo an’ i Isiraely; ary ny toetra ratsy sy maloton’ ireo izay nihemotra tao amin’ ny tsy finoana. Tokony ho 600–592 talohan’ i J.K.
Ny nahitan’ i Nefia tamin’ ny fahitana ny fiangonan’ ny devoly niorina teo anivon’ ny Jentilisa, ny nahitana sy ny nanjanahana an’ i Amerika, ny fahaverezan’ ny maro tamin’ ireo ampahany tsotra sady sarobidy tamin’ ny Baiboly, ny toe-javatra vokatry ny apôstazian’ ny Jentilisa, ny famerenana ho amin’ ny laoniny ny filazantsara, ny fivoahan’ ny soratra masin’ ny andro farany, ary ny fanorenana an’ i Ziona. Tokony ho 600–592 talohan’ i J.K.
Nilaza tamin’ i Nefia ny fitahiana sy ny ozona hianjady amin’ ny Jentilisa ny anjely iray—Tsy misy afa-tsy fiangonana roa: ny fiangonan’ ny Zanakondrin’ Andriamanitra sy ny fiangonan’ ny devoly—Nenjehin’ ny fiangonana makadiry sy maharikoriko ny Olomasin’ Andriamanitra tany amin’ ny firenen-drehetra—Hanoratra ny momba ny fiafaran’ izao tontolo izao ny Apostoly Jaona. Tokony ho 600–592 talohan’ i J.K.
Ny mahasarotra ny fandraisan’ ny olon-dratsy ny fahamarinana—Nanambady ny zanakavavin’ i Ismaela ny zanakalahin’ i Lehia—Nitarika ny diany tany an-tany foana ny Liahônà—Nosoratana ombieny ombieny teo amin’ ny Liahônà ny hafatra avy tamin’ ny Tompo—Maty Ismaela; nimonomonona ny ankohonany noho ny fahoriany. Tokony ho 600–592 talohan’ i J.K.
Nodidina i Nefia hanamboatra sambo iray—Nanohitra azy ny rahalahiny—Namporisihany izy ireo tamin’ ny famohazana ny tantaran’ ny fitondran’ Andriamanitra an’ i Isiraely—Nanenika an’ i Nefia ny herin’ Andriamanitra—Norarana tsy hikasika azy ny rahalahiny fandrao dia halazo toy ny zozoro maina izy ireo. Tokony ho 592–591 talohan’ i J.K.
Ny fahavitan’ ny sambo—Filazana ny nahaterahan’ i Jakôba sy i Jôsefa—Niondrana an-tsambo ny mpiray dia hankany amin’ ny tany nampanantenaina—Nandray anjara tamin’ ny filalaovan-dratsy sy ny fikomiana ny zanakalahin’ i Ismaela mbamin’ ny vadiny avy—Nifatotra i Nefia ary natosiky ny tafio-drivotra mahatsiravina hiverina ilalana ny sambo—Nafahana i Nefia, ary nitsahatra ny tafiotra noho ny fivavahany—Ny fahatongavan’ ny olona tany amin’ ny tany nampanantenaina. Tokony ho 591–589 talohan’ i J.K.
Nanao takelaka tamin’ ny akora i Nefia ary nirakitra an-tsoratra ny tantaran’ ny olony—Eninjato taona taorian’ ny fotoana nandaozan’ i Lehia an’ i Jerosalema vao ho tonga ny Andriamanitry ny Isiraely—Nilaza ny amin’ ny fijaliany sy ny nanomboana Azy i Nefia—Hohamavoina ny Jiosy sy haely patrana hatramin’ ny andro farany izay hiverenany amin’ ny Tompo. Tokony ho 588–570 talohan’ i J.K.
Nanambara tamin’ ny Isiraely ny zava-kinendriny ny Tompo—Efa nofinidy tao amin’ ny memin’ ny fahoriana i Isiraely ary handeha hiala an’ i Babylona—Ampitahao amin’ i Isaia 48. Tokony ho 588–570 talohan’ i J.K.
Ho fahazavana ho an’ ny Jentilisa ny Mesia ary hanafaka ny mpifatotra—Hangonina amin-kery i Isiraely amin’ ny andro farany—Ho ray mpitaiza azy ny mpanjaka—Ampitahao amin’ i Isaia 49. Tokony ho 588–570 talohan’ i J.K.
Haely patrana eran’ ny lafiny rehetra amin’ ny tany i Isiraely—Hitaiza sy hamelona an’ i Isiraely amin’ ny filazantsara ny Jentilisa amin’ ny andro farany—Hangonina i Isiraely ka hovonjena, ary hirehitra toy ny mololo ny olon-dratsy—Horavana ny fanjakan’ ny devoly ary hafatotra i Satana. Tokony ho 588–570 talohan’ i J.K.